Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseLebhanon zokuPhula » ILebhanon iya mnyama emva kokuphela kombane
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseLebhanon zokuPhula • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Izibane zombane ziphelelwe ngamafutha kuba urhulumente ebengenayo imali yamanye amazwe ukuhlawula abathengisi bamandla bamanye amazwe. Iinqanawa ezaziphethe ioyile kunye negesi kwakungavunyelwanga ukuba zibekwe eLebhanon de kwenziwe intlawulo yokuhanjiswa kwazo ngeedola zaseMelika.
Imeko yokunikezelwa kwamandla yayisele imbi eLebhanon ngaphambi kokuphela kombane.
Abasemagunyeni baya kuzama ukusebenzisa oovimba bemikhosi yeoyile ukuze izityalo zamandla ziphinde ziqale ukusebenza okwethutyana.
Ngokutsho kwemithombo yaseburhulumenteni yasekuhlaleni, ukucima kombane eLebhanon kunokuhlala "iintsuku ezininzi".
ILebhanon ijongene nokucinywa kombane emva kokunyanzelwa ukuba kuvalwe namhlanje, ngenxa yokunqongophala kwamafutha.
Ngokwamagosa aseLebhanon, phantse ukugqitywa kokucinywa elizweni elinengxaki malunga nezigidi ezithandathu kulindeleke ukuba kuqhubeke 'iintsuku ezimbalwa'.
Izikhululo zombane zeDeir Ammar kunye neZahrani bezibonelela nge-40% yombane waseLebhanon, ngokutsho komsebenzisi, u-Electricité Du Liban.
"Inethiwekhi yamandla aseLebhanon iyeke ngokupheleleyo ukusebenza emini namhlanje, kwaye akunakulindeleka ukuba isebenze kude kube ngoMvulo olandelayo, okanye kangangeentsuku ezininzi," latsho eli gosa.
Abasemagunyeni kurhulumente waseLebhanon bazakuzama ukusebenzisa oovimba bemikhosi yeoyile ukuze izixhobo zombane ziphinde ziqale ukusebenza okwethutyana, kodwa balumkise ukuba ayizukwenzeka nanini na.
Izibane zombane ziphelelwe ngamafutha kuba urhulumente ebengenayo imali yamanye amazwe ukuhlawula abathengisi bamandla bamanye amazwe. Iinqanawa ezaziphethe ioyile kunye negesi zazingavumi ukungena Libhanon Kude kube intlawulo yokuhanjiswa kwabo yenziwe kwiidola zaseMelika.
Iponti yaseLebhanon itshone nge-90% ukusukela nge-2019, phakathi kwengxaki yezoqoqosho, ethe yanziswa ngakumbi ngumqobo kwezopolitiko. Amacandelo aphikisanayo akakwazanga ukwenza urhulumente kwiinyanga ezili-13 okoko kwaqhambuka ukubulala kwizibuko lase Beirut, Ukufumana kuphela indawo efanayo emva kokuvunywa kwekhabhinethi entsha ngoSeptemba.
Imeko yonikezelo lombane yayimbi elizweni phambi kokucinywa kombane, abahlali bekwazi ukufumana umbane iiyure ezimbini kuphela ngosuku.
Abanye babahlali bebethembele kwiijenereta zabucala zedizili ukuba zigunyazise amakhaya abo, kodwa ezo zixhobo bezinqongophele kweli lizwe.